Aiza Ny Tranom-Bakoka Tsara Indrindra Tao Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Aiza Ny Tranom-Bakoka Tsara Indrindra Tao Eoropa
Aiza Ny Tranom-Bakoka Tsara Indrindra Tao Eoropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Soeda, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 27/11/2020)
Raha toa ianao ka manontany tena hoe aiza no ahitana ny tsara indrindra tranombakoka any Eoropa, izahay no nanarona! Na izany kanto, -pirenena, na voajanahary tantara, ny tranombakoka avy amin'ny lisitra tsy handao velively mampitolagaga anao.
Inona no more, dia afaka hahatratra ireo rehetra ireo toerana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby raha mitady takatry ny fitaovam-mandeha. Aoka isika manana handinika tranombakoka tsara indrindra tany Eoropa sy aiza no ahitana azy ireo:
Louvre Museum, Paris, Frantsa
Ny Louvre mety ho iray amin'ireo tranombakoka malaza indrindra ao Eoropa sy izao tontolo izao. Io no lehibe indrindra, manarona faritra iray an'ny 72,735 metatra joro. Zavatra tsy mahafinaritra an-trano ny mozea dia mihoatra noho ny 35,000 zavatra ary dia iray amin'ireo fari-tany Paris. Tsy maintsy mitsidika azy raha nandeha tany Paris lamasinina!
Ny anaran 'ilay lapa dia avy amin'ny teny latinina Ny fihazana mpanjaka dia, midika hoe "mpanjaka mihaza". Tamin'ny taonjato faha-17 sy faha-18, dia lehilahy iray tena ratsy ho an'ny ny fihazana fanafihana ny Duke Charles Emmanuel II. Ary ankehitriny ny lapa enchants mpitsidika sy ny fomba Santionan'izany fiangaly-hatsaran-tarehy. Tsy afaka izany raha malahelo mahita ny tenanao ao Turin.
Milan any Turin Lamasinina
Lake Como ho any Turin Lamasinina
Genoa ho any Turin Lamasinina
Parma ho any Turin Lamasinina
Ny Museum anilan'ny rano mandeha, Antwerp, Belzika
Ny Museum anilan'ny rano mandeha na MAS no lehibe indrindra ao amin'ny tranom-bakoka Anvers. Raha mitady Panoramika View, misy maimaim-poana ny fidirana ho any amin'ny tampon-trano ny mozea. Ny sarotra ny MAS ihany koa dia manana trano fisakafoanana ary ny kafe ambany izany. Ny tranombakoka mihitsy no tiana sady mendrika ny fitsidihana raha ao Antwerp.
ara-baiboly, Amsterdam, ny Pays-Bas
Tranom-bakoka iray hafa ao amin'ny Pays-Bas, ny ara-baiboly mozea Faritany Amsterdam. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra tany Eoropa tranombakoka raha te-hianatra bebe kokoa momba ny Baiboly. Mitsidika Bijbels dia manampy hahatakatra ny dikany sy ny fiantraikany ao amin'ny Baiboly amin'ny fiaraha-monina Holandey. Tsy isalasalana fa tsy manam-paharoa mozea, mifanaraka tsara ho an'ireo izay tia ara-pivavahana tantara.
Kunsthistorisches Museum, Vienna, Aotrisy
Kunsthistorisches Museum no tsara indrindra-fantatra zavakanto tranom-bakoka ao Aotrisy, fantatra koa amin'ny hoe ny Tranombakoky ny tsara Arts. Ny sasany ny fampisehoana malaza indrindra dia ahitana ny asan'i Rembrandt, Michel-Ange, Raphael, ary Rubens. Tena nahagaga ny mpitia zavakanto manana kanto kanto hatramin'ny nisokafany 1891. Na iza na iza nitsidika Vienna lamasinina dia tokony hanao fandaharana hijery ny tranombakoka Kunsthistorisches.
MACHmit Ankizy Museum, Berlin, Alemaina
Ho an'ny mpandeha miaraka amin'ny ankizy, tsy mahazo misy tsara noho ny MACHmit Ankizy Museum Alemaina. Raha tsapanao fa mitady any Berlin, ho azo antoka izay hijery tsara MACHmit sy ny isan-karazany ny manintona. Izy ireo ho an'ny olon-dehibe tsara ihany koa, maro asa mampientam-po toy ny zavakanto laboratoara, atrikasa printy, ary niakatra labyrinth.
Skansen Open-Air Museum, Stockholm, Soeda
Skansen misokatra-rivotra tranom-bakoka no voalohany amin'ny karazany any Soeda. Ary nanokatra in 1891 ary nitombo ho tranombakoka malaza indrindra any Stockholm. Ny fomba fijery tsara tarehy avy any Royal Djurgarden no tombony ho nitsidika Skansen. Ary ho an'ireo izay tia nahita teratany Skandinavia-biby, misy zoo izay mampiseho azy ireo.
Ny tranombakoka tsara indrindra any Eoropa no miandry anao. Raha toa ianao ka vonona ny handeha, boky ny saran-dalana dieny izao, ary hifaly ny mitaingina!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#tranombakoka #traveleurope europetravel eurotrip tranom-bakoka Travel travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands traveltips
Aiza No Hahitana Eoropa Tena Mahafinaritra Ny Maritrano
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe